Kismaayo News » Qodobadii ka soo baxay shirkii London
Qodobadii ka soo baxay shirkii London
Kn: Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed “Farmaajo” ayaa ka hadlay shirka London ee Soomaaliya oo 11ka May 2017 lagu qabtay dalka Ingiriiska. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn u mahad celiyay Ra’iisul waasaraha dowladda Britain Theresa May qaban qaabinta iyo ka mira-dhalinta shirka aayaha Soomaaliya, iyadoo aanay ahayn markii ugu horeysay ee UK ay shir u qabato Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa u mahad celiyayay Guddoomiyaha Midowga Afrika Mousa Faki Mahamat iyo xoghaya guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guiterres. Wuxuu Madaxweynaha xusay in shirkani u qiimo gaar ah ugu fadhiyo Soomaaliya, isagoo intaa raaciyay in bahwadaagta Soomaaliya ay garab istageen dalkiisa iyo shacabka Soomaaliyeed xiliyadii ugu daruufta adkaa. Wuxuu sidoo kale u mahadceliyay dhamaan in ka badan 40-kii dal ee ka soo qeyb-galay shirka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa mahadcelin kadib sheegay in muddo dheer oo hannaan doorasho la soo maray ay ugu dambeyn qabsoontay doorashadii Madaxtinimo 8da Febraayo 2017. Wakiiladda shacabka Soomaaliyeed ayaa doortay isbedel iyo jiho cusub oo ay Soomaaliya yeelato. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi “Farmaajo” ayaa sheegay inay dhiirigalineyso isla markaasna uu maanka ku hayo xajmiga tageero ee bulshadiisu ay u muujisay kadib iyo ka hor doorashiidii la doortay, isagoo intaa ku daray inuu maanka ku hayo wax-qabadka ay ka filayaan bulshadda oo ay ugu horeyso sugidda amniga iyo hirgelinta adeeyada aas-aasiga ah ee bulshada, sida adeegga caafimaadka iyo waxbarashada. Wuxuu Madaxweynu yiri “Inkastoo aan si hufan oon kala go’lahayn aan uga shaqeynayno sidii aan u rumeyn lahayn filashada iyo rajada ay naga sugayaan dadkeenna, waxaan si qumaati ah u horumarin doonnaa tayada nololeed ee Muwadiniinteena Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Dalka ayaa khudbadiisa ku sheegay in Soomaaliya ay leedahay taariikh dimuqradiyadeed oo soo jireen ah, laga soo bilaabo sanadkii 1960, wuxuu intaa ku daray inay Soomaaliya ka mid tahay dalalka ugu horreeyay dimuqraadiyadda Afrika ee Madaxweyne xukunka ku fadhiya uu si nabad ah ugu wareejiyay midkale oo doorasho uga guuleystay.
Madaxweynaha ayaa sheegay inkastoo ay jiraan caqabado wajahaya dalkiisa, waxa uu tilmaamay in xoojinta hey’addaha dimuqraadiga ah ay tahay waxa horseedi kara soo kabashada dalkiisa. Wuxuu intaa ku daray in dowladiisu aanay waqti lumin doonin sidii ay uga dhabeyn lahayd hirgelinta ballanqaadyadii uu sameeyay xilligii ololaha doorashada Soomaaliya, kuwaas oo ay ugu horeyaan saddex arrimood oo kala ah, argagixisada, musuqmaasuqa iyo saboolnimada, isagoo ku nuuxnuuxsaday aragtidiisa ku aaddan sidii loo hirgalin lahaa saddexdaas arrimood, oo ay ugu horeyso dhisidda hey’addo dowli oo awood iyo tayo leh kuwaas oo diiradda saari doona sugidda amniga iyo dowladda inay hormuud u noqoto hannaanka dowlad wanaaga. Wuxuu intaa raaciyay in ahmiyad weyn uu siin doono sidii Soomaaliya ay uga soo dhalaali lahayd booska ay ku leedahay caalamka iyo horumarinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa yiri “Waxan aaminsanahay in ganacsiga iyo maalgashigu ay ka mid tahay waxyaalaha dhimi kara saboolnimadda isla markaasna abuuri kara fursado shaqo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in ajendaha isbaddalkiisa dowladnimo ay ku bilaabatay xulashada Ra’iisul wasaare howlkar ah oo hoggaan hufan leh. Wuxuu sheegay in Ra’iisul wasaaraha uu xushay, Xasan Cali Khayre oo dowladda ku soo biirinayo sanooyin badan oo qibrad sare oo dhanka beni’aadnamida iyo horumarinta ah, soona qabtay howlo ay ka mid tahay ganacsiga.
Wuxuu Madaxweynuhu xusay in iyada oo laga faa’ideysanayo khibradda iyo xiriirka baaxadda leh ee uu la leeyahay dhammaan jilayaasha kale siyaasadda, R/wasaaraha ayaa soo dhisay xukumad aqoonyahanno ah oo ay ku jiraan 5 Wasaradood oo ay hogaaminayaan haween –midii ugu ballaarneyd tariikhdeenna– iyo wasiiro dhallinyaro ah oo matalaya 85% ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo ay da’dooda ka hooseyso 40 jir. Mid ka mid ah wasiirada ayaa ka yimid xerada xaqootiga ugu weyn caalamka ee dhadhaab, Kenya – Tariikhdiisa ayaa wax badan inooga sheegaysa isbedelka uu galayo dalka Soomaaliya. Nasiib darro Wasiirkaas ayaa noloshiisa waayey isbuucii la soo dhaafay balse tariikhda uu ka tagay ayaa inala joogi doonta waligeed ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrinta ku saabsan siyaasadda guud ee dhanka aminga, isagoo xusay in dhawaan la sameeyay guddiga guud ee Amniga Qaranka, wuxuu sheegay inaysan shaqadoodu aheyn oo kaliya inay arrimaha amniga ka hadlaan balse sidoo kale ay wax ka qabtaan arrimaha quseeya amniga. Madaxweynaha ayaa sheegay in xaqiiqda ah in Hoggaanka maamul goboleedyada ay maanta ku wehliyaan kulankiisa ay astaan u tahay dadaalka wadajirka ee midnimo xooggan iyo iskaashiga madaxda Soomaaliyeed. Wuxuu intaa raaciyay in la dhameystiri doono sharciga axsaabta si ay Xildhibaanada iyo axsaabtu ay u sameynsan karaan xisbiyo ku dhisan sharciyad si waqaafsan dastuurka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in aminga uu ahmiyad gaar ah ugu fadhiyo dowladiisa. balse ay dowladiisu u baahantahay imkaaniyaatka muhiimka ah si ciidamada geesiyada ah ee Soomaaliyeed u soo afjaraan kooxaha argagixisadda ah ee Al-Shabaab.
Wuxuu intaa ku daray in iyadoo la kaashanayo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya in dowladdiisu ay ka adkaan doonto Al-Shabaab dhowrka sanno ee soo socda. Madaxweynaha oo sii hadlaya wuxuu yiri “Markii aan ka xoreyno kooxaha argagixisada ah dhulka harsan, isla markaasna aynu isku furno waddooyinka si ay u maraan sahayda loogu tala galay dadweynaha, waxaan intaas kadib xasilin doonnaa dalka, iyadoo iskaashi lala sameynayo maamul goboleedyada ayaa la dhisi doonaa maamuulka degaanadda”.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa oo dhinacyadda badan taabaneysay ku soo qaatay in xilli fog ay ciidamadda geesiyaasha ah ee Soomaaliyeed iyo kuwa argagixisada ah isticmalayeen hubka fudud oo isku nuuc ah – oo ay ugu badan yihiin qoryaha AK47 ka, tiyoo ay jirto geesinimada iyo naf-huridda ciidamadeenna rag iyo dumarba leh, waxay adeegsadaan qalab la mid ah midka cadawga oo aanay suurtagal noqoteen in Al-Shabaab laga adkaado, AMISOM oo ku hubeysan qalabka ciidan ee culus la’aanteed. Wuxuu Madaxweynuhu sheegay in la joogo xiligii la qaadi lahaa cunoqabateynta hubka ee Soomaaliya saaran si ay ciidamada Soomaaliyeed u helaan qalab tayo leh oo ay kula dagalamaan kooxaha argagixisada ah. Wuxuu intaa ku daray inay kala shaqeynayaan Qaramada Midoobay iyo bahwadaagta kale ee Soomaaliya sidii loo jeexi lahaa khariidad qeexan oo suurtaglisa in cunaqabateynta hubka la qaado.
Madaxweynaha ayaa amaanay doorka ay saxiibada Soomaaliya qaadanayaan nabad ku soo dabaalidda dalkiisa iyo tageerada joogtada ah ay siiyeen sanooyinkii la soo dhaafay. Wuxuu yiri “Qaarkood waxay na siiyaan tageero dhaqaale halka kuwa kale ay na siiyaan tageero farsamo iyo qalab. Wuxuu si gaar ah u boogaadiyay AMISOM, isagoo intaa raaciyey “Ciidamadda nabad ilaalinta ee AMISOM waxay nala shaqeynayeen 10 sanno – in ka badan inta uu qof walba maanka ku hayey. Intii xiligaa lagu jirayna waxay noo hureen noloshada askartooda, iyagoo baadigoob ugu jira sidii ay Soomaaliya u caawin lahayeen, isla markaasna looga adkaan lahaa Al-Shabaab, loona dhisi lahaa ciidamadeenna.
“Xaaladda amni darro lama badali karo, iyadoo aan laga hadlin waxyaabaha asalka u ah kuwaas oo ay ka mid yihiin saboolnimada iyo shaqo la’aanta. Inta badan dhallinyaradeena ee xilligan waa shaqo la’aan, midaas oo siisay argagaxisada jawi ay ku marin habaabiyaan dhalliyaradeenna” ayuu yiri Madaxweynuhu. Isagoo sii wata ayuu Madaxweynuhu hadalkiisa ku daray “Waa inaan wax ka qabanaa arrimahan iyadoo loo marayo qorshe dib loogu soo kabayo dhaqaalaha oo hufan. Waxay dowladdu isla garatay ahmiyadaha kuwooda ugu horreeya oo ay saldhig u tahay Qorshaha horumarinta Qaranka”.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dalal badan oo caalamka ka tirsan ay muujiyeen rabitankooda ku aaddan sidii ay uga cafin lahayeen Soomaaliya deymaha ay ku leeyihiin. Wuxuu sheegay inuu xusi karo dalalka Jaamacadda carabta oo dhawaan uga dhawaaqay shiweynihii Cammaan ee Maarso in dalalka ku bahoobay ay diyaar u yihiin inay deymihii ay Soomaaliya ku lahayeen ay ka dhafaan. Waan uga mahadcelinaynaa abaalkan walalaheenna carbeed ayuu yiri Madaxweynaha
Wuxuu Madaxweyne Farmaaajo sidoo kale soo hadal qaaday in horumarinta dhaqaale ee Soomaaliya ay leedahay ay tahay xirfadda ganacsi yaqaanimo oo dadkiisa Soomaaliyeed, isagoo sheegay in dowladiisu ay qaadi doonto talaabooyinka lagama maarmaanka ah sidii loogu suurtogalin lahaa dadka Soomaaliyeed inay ganacisgooda ka hirgashtaan Soomaaliya, iyadoo si isku mid ah loo awoodsiinayo gacansiga yar-yar iyo midka weyn.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay caqabadda hey’addaha maaliyadda Soomaaliya ka heysta isticmaalka adeegyada maaliyadeed ee caalamiga ah. Ganacsiga xawaaladaha kuwaas oo u dira Soomaaliya ilaa labo bilyan dollar sanadkiiba, ma adeegsan karaan Bangiyada UK iyo kuwa Mareykanka, iyadoo ay ugu wacantahay xayiraaddii lagu soo rogay. In kastoo uu jiro horukac aan sameynay sanooyinkii la soo dhaafay, waxaa la joogaa xilligii loo fududeyn lahaa hey’addaha maaliyadda Soomaaliyeed sidii ay u adeegsan lahayeen Bangiyada dalalkan.
“Iyadoo ay jiraan duruufaha badan ee ay wajahayaan dadkeyga, waa inaan dhammaan xasuusannaa in Ummadda Soomaaliyeed ay u babac dhigeen masiibooyinka daabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga ahayn, waxayna si cajiib leh u soo laba kacleyeen, iyagoo hirgaliyey isgaarsiin iyo nidaam xawaladeed kuwa ugu casrisan Afrika” ayuu yiri M/weyne Farmaajo.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu ku soo gaba-gabeeyay in iyadoo ay dowladiisu kaashaneyso bahwadaagta Soomaaliya iyo saxiibada kale in ay ka faa’ideysan donaan fursadaha horyaalla. Wuxuuna intaa ku daray “Waxay tani horseedi doontaa isla xisaaabtan dhab ah, middaas oo aan aad u soo dhaweynayo”.
Ugu dambeyn Madaxweynaha ayaa ku soo gabagabeeyay inay Soomaaliya hore u soo mareen shirar kala duwan oo hore loogu soo qabtay, balse maanta uu xaalku ka duwan yahay sidii hore sababtoo ah ayuu yiri waxaan idiin xaqiijin karaa dhamaantiin in Soomaaliya aanay marnaba dib ugu laaban doonin marxaladihii adkaa ee ay soo martay, balse un ay hore ugu socon doonto dhabaha horumarka iyo barwaaqada.